Kumba | Kirin Jewelry
Isu tinotarisa mukugadzira zvishongo kupfuura makore gumi nematatu.
Sterling sirivha yezvishongo mune akasiyana magadzirirwo
Kirin Jewelry Company, yakatsaurirwa kubhizinesi re925 Sirivha Zvishongo, senge, 925 Sterling Silver Earrings, 925 sterling siringi bracelets, 925 sterling sirivha bangles. Zvishongo zvishongo zvinotarisisa kutendeseka uye bhizinesi mukurumbira. Isu tinonyatso tarisa mhando uye mutengo wekugadzira mukugadzirwa. Zvese izvi zvinovimbisa mhete kuve yehunhu-hwakavimbika uye mutengo-unofadza.
Charm 925 Sterling Suva Ruva CZ Ruby Mhete dzeMakadzi neBlack Gold Plating 300040
Charm 925 Sterling Suva Ruva CZ Ruby Mhete dzeMakadzi neBlack Gold Plating 300040 https://www.kirinjew.com
Yakakosha 925 Sterling sirivha Round Mhete dzevakadzi nemhete dzeGoridhe 3552
Yakakosha 925 Sterling sirivha Round Mhete dzevakadzi neGoridhe Yakarongedzwa 35802 https://www.kirinjew.com
OEM Chains Tsamba 925 Sterling Siri Necklace ine Rhodium Plating yeMukadzi 71612
OEM Chains Tsamba 925 Inoshongedza sirivhi Muhuro neRhodium Plating yeMukadzi 71612 https://www.kirinjew.com
Wholesale Mvura Kudonhedza 925 Sterling Siliva CZ Mhete yeMukadzi ane Rhodium Plated 102263
Yakawedzera Mvura Kudonhedza 925 Sterling Siliva CZ Mhete yeMukadzi ane Rhodium Plated 102263 https://www.kirinjew.com
ODM& OEM Sevhisi
Chete laser vatengi zita rekambani kana logo pane izvo zvishongo:
Kune anopfuura makumi mashanu ezvakagadzirwa mudura redu rekuratidzira, kusanganisira mhete, mhete, zvishongo, maketani, zvishongo, mabhanhire, mabhureki, seti yezvishongo. Iwe unogona kusarudza masitaera aunoda kubva kuedu jewlery albhu, uye kana iwe ukaisa iyo odha, unogona kutora kuisa logo yako kana zita rekambani pane zvishongo.
1) 1.2 mamirioni zvidimbu zvinhu zvegore kugona
2) 15-45days nguva yekuendesa
3) Iyo yakakwikwidza mutengo
4) Anopfuura zviuru makumi mashanu dhizaini mune yekuratidzira
Kirin jewelry jewelry mugadziri, mutengesi uye mutengesi ari muZhuahai, Guangdong Province, China, ine vashandi vangangoita mazana mashanu, 1,2 miriyoni zvidimbu zvinhu zvegore kugona. Isu tinogadzira 925 sterling sirivha / zvishongo zvendarira mune akasiyana magadzirirwo, anosanganisira mhete, mhete, zvishongo, chishongo chomuhuro, zvishongo, mabhanhire uye mabhureki ane semi-anokosha matombo anokosha, dombo rekugadzira uye cubic zirconia, kupera kwakanaka nesirivha, rhodium, kana nhema rhodium, rose goridhe uye goridhe yero yakafukidzwa.
Zvishongo zvedu zvinosimbisa pamhando yekudzora mune ese nhanho yebasa rezvishongo. Isu tinodzivirira iko kukanganisa kunogona kukonzera zvishongo zvedu kusasarudzwa nesu vasati vasvika kune vatengi vedu.
Taura nesu kuti titore mutengo
Isu takavimbika sosi yezvishongo inova deserver kuratidza kune vako vanokosheswa vatengi.
Ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu kana iwe uine chero mibvunzo. Uye isu tiri kutarisira kukushandira iwe mune redu bhizinesi munda.